Shaandheeyay naqshadda Samsung Galaxy View 2 | Androidsis
Xaday a Samsung Galaxy View 2 cusub
Samsung waa mid ka mid ah noocyada Android ee sii wadaya sharad si ay kiniiniyada ugu soo saaraan suuqa. Xaqiiqdii, illaa iyo sanadkaan waxaan awoodnay inaan la kulanno seddex nooc oo cusub oo ah nooca Kuuriya. Galaxy Tab A 8.0, ka Galaxy Tab 10.1 iyo kan ugu awooda badan dhamaantiis, the Galaxy Tab S5e. Inkasta oo shirkadda Kuuriya ay ka shaqeyneyso mid cusub, taas oo horey loo sii daayay. Tani waa Galaxy View 2.
Sida magaceedu noo oggolaado waa jiilkii labaad ee kiniin Samsung ah. Afar sano ayaa laga joogaa markii ugu horreysay ee Galaxy View laga bilaabay suuqa. In kastoo ilaa iyo hadda aysan umuuqan inay jiraan qorshayaal lagu soo bandhigayo nooc cusub. Naqshadaynta noocyadan cusub ayaa durba la dusiyay.
Samsung Galaxy View wuxuu ahaa kiniin caan ku noqday cabirkiisa weyn. Wax ku sii jira jiilkan cusub, maadaama ay la imaan lahaayeen a 17,5-inji cabbirka shaashadda. Ugu yaraan sida ku cad daadigan. Naqshaddu waxay la mid noqon doontaa moodelkii asalka ahaa, oo leh shaashado si cad loogu dhawaaqay shaashadda.
Inkasta oo ay dhacdo in, kiniinku wuxuu soo bandhigayaa xoogaa isbeddello ah qaabkiisa. Sababtoo ah waad arki kartaa xaaladdan, nooc cusub oo taageero ah ayaa lagu soo bandhigaa xagga dambe. Xaaladdan oo kale, nidaam leh nooc fiiqan ayaa loo adeegsadaa, taas oo u oggolaanaysa habkan in lagu kala bixiyo taageerada oo markaa lagu hagaajiyo xagasha lagu dhigayo kiniinka markasta.
Wixii hadda wax macluumaad ah oo ku saabsan muraayadaha waxaan ka filan karnaa saxiixan Galaxy View 2. In kasta oo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan processor-ka. Waxaa la sheegay in processor-ka lagu dhex doortay uu noqon lahaa Exynos 7885, laakiin maahan wax hadda la xaqiijiyay.
Sidoo kale waxba kama ogin wax ku saabsan daahfurka muuqaalkan Galaxy View 2 suuqa. Waxa kaliya ee aan ilaa hadda ka ognahay kiniinkan waa xoqiddan. Marka waa inaan sugnaa wararka la taaban karo ee ku saabsan. Waxaa laga yaabaa inaan dhowaan ogaanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Xaday a Samsung Galaxy View 2 cusub
[VIDEO] Sida loo abuuro nidaamkeenna ugu horreeya ee Bixby Routine-ka Galaxy S10 +
Michael Kors Sofie smartwatch waxaa lagu cusbooneysiiyay horumarkii la filayay